Moto E 4G Nkọwapụta | Gam akporosis
Anyị nwere ike imecha kpochapụ obi abụọ banyere ngwaọrụ ọhụrụ a dị ala site na Motorola, ọ bụkwa na atụmanya na ịchọrọ Motorola Moto E4G o Motorola Moto E 2015 mbipụta enweelarị nkwupute ya n'ihu ndị mgbasa ozi site na ntọhapụ pịa.
Obi abụọ adịghị ya, Motorola na-aga n'ihu ịkụ nzọ mma ọnụ na-agaghị ekwe imeri àgwà / price ruru, na dịka o nwetalarị ochie Motorola Moto E, ọnụ ọnụ a abụrụla eze na-enweghị mgbagha nke gam akporo dị ala. N'ebe a, anyị na-agwa gị ihe niile gbasara nkọwapụta nke ọrụ ọhụụ na nke ọhụụ Moto E 4G.
Nka na ụzụ nkọwa nke Motorola Moto E 4G
Maka ugbu a, gwa gị na ọ ka dị na ntanetị ma ọ bụ n'ụlọ ahịa anụ ahụ. Ozugbo anyị maara ihe banyere ya na Motorola gosi anyị ire ya, na Androidsis, dị ka ọ dị na mbụ, anyị ga-agwa gị ozugbo.
Na ị masịrị Motorola Moto E 4G ọhụrụ a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Ihe ohuru Motorola Moto E 4G dị ugbu a. Anyị na-agwa gị ihe niile njirimara teknụzụ ya na ọnụahịa ya
gịnị kpatara nnukwu hype maka nke a? mgbe Xperia E4G dị elu n'ihe niile. obere na ọnụahịa
All ahuhu nke World Superbike Championship na SBK14 Official Mobile Game